Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ihe na -emepụta ụdị ihe nrụpụta hydraulic nke China NA -ENWU MMIRI
Injin Yanmar nke Japan
Ike Njikwa 38.1kw/2200rpm
Rotary moto Doosan
Na -eje ije
Ụgbọ ala Doosan/EDDIE Isi
DH60-7 obere onye na-egwu ihe nwere arụmọrụ kwụsiri ike yana arụ ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin Yanmar nke Japan na -ebubata iji mezuo ụkpụrụ nsị nke ụlọ. A kwadebere ya na onye ofufe jụrụ oyi na nnukwu mkpọtụ. Ọ bụ injin gburugburu ebe obibi na -emezu ụkpụrụ mkpọtụ Europe. N'otu oge ahụ, anyị na -eburu n'uche mmepe nke nchekwa gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbanwe arụmọrụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ọrụ ahụ. Onye na-egwu ihe DH60-7 na-eji sistemụ hydraulic Korea kacha mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike kesaa mmanụ nha dịka ihe achọrọ si dị, ka ogwe aka, mkpanaka na bọket wee nwee ike rụọ ọrụ na -agbanwe, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Ghọta ihe ị chọrọ n'ezie.
DH60-7 mini excavator dabara maka igwu pipeline, ibelata mkpọda, na obere ihe owuwu na ụlọ ọrụ dịka ọrụ ugbo na oke ọhịa. Ọ na -egosipụtakwa arụmọrụ na -agbanwe agbanwe na oghere ọrụ siri ike ma ọ bụ gburugburu ebe ọrụ siri ike.
Obere onye na -egwupụta ihe DH60-7
Ogo ụlọ (mm)
Radius nke gyration (mm)
ịdị elu ọkwa oke ibu (mm)
ogologo ọganihu (mm)
ogologo crawler (mm)
obosara crawler (mm)
obosara palte na -adị ogologo (mm)
opekempe ala (mm)
ịwụ igwu ike（KN）
mkpisi igwu osisi（ KN）
Oke diggign nso (mm)
oke ala egwu ala (mm)
oke igwu omimi (mm)
ogo kachasị egwu ala (mm)
ogo kachasị na -ebutu (mm)
Onye isi nha
oke igwu omimi omimi (mm)
Obosara elu (mm)
Injin Japan Yanmar 4TNV98
Ike akara 45kw/2100rpm
Ogwe njikwa Parker
DH80-7 obere onye na-egwu ihe nwere arụmọrụ kwụsiri ike yana ịrụ ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin Yamaha nke Japan na -ebubata iji mezuo ụkpụrụ mgbapụta ụlọ. A kwadebere ya na onye ofufe jụrụ oyi na nnukwu mkpọtụ. Ọ bụ injin gburugburu ebe obibi na -emezu ụkpụrụ mkpọtụ Europe. N'otu oge ahụ, anyị na -eburu n'uche mmepe nke nchekwa gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbanwe arụmọrụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ọrụ ahụ. Onye na-egwu ihe DH80-7 na-eji sistemụ hydraulic Korea kacha mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike kesaa mmanụ nha dịka ihe achọrọ si dị, ka ogwe aka, mkpanaka na bọket wee nwee ike rụọ ọrụ na -agbanwe, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Ghọta ihe ị chọrọ n'ezie.
DH80-7 “Obere onye na-egwupụta ihe” bụ ngwaọrụ dị tọn 8 nke e mere iji gosi ike igwu olulu. Tụnyere ngwaahịa ngwaahịa ọkwa ndị ọzọ, ọ nwere atụmatụ dị egwu nke ike igwu ala na nnukwu traction. Uru na njiri mara ya na -ekpebi ọnọdụ ya dabara adaba maka iwu obodo, dịka nkewa okporo ụzọ.
Obere olulu mmiri DH80-7
ngụkọta ogologo (mm)
mkpokọta obosara (mm)
elu obosara (mm)
ogologo ogologo crawler (mm)
ogologo ụgbọ okporo ígwè
Oke igwu ala (mm)
Ụdị mgbapụta isi
mgbapụta piston axial na -agbanwe agbanwe
Isi mgbapụta eruba（ L/min）
Oke igwu ala omimi obosara (mm)
Injin Isuzu 4jj1
Ike akara 75kw/1900rpm
Ogwe njikwa KYB
Moto na -eje ije Doosan
Isi mgbapụta Rexroth/Doosan
DH150-7 onye na-egwupụta ihe nwere ọkara nwere arụmọrụ kwụsiri ike yana arụ ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin mbụ ahụ ka o wee nwee ike nweta nsị ikuku ụlọ. A kwadebere ya na onye ofufe jụrụ oyi na nnukwu ịgbachi nkịtị. Ọ bụ injin gburugburu ebe obibi na -emezu ụkpụrụ mkpọtụ Europe. Mmepe nke nchekwa gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbanwe arụmọrụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ọrụ ahụ. DH150-7 excavator na-eji sistemụ hydraulic Korea kacha mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike kesaa mmanụ nha dịka ihe achọrọ si dị, ka ogwe aka, mkpanaka na bọket wee nwee ike rụọ ọrụ na -agbanwe, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Ghọta ihe ị chọrọ n'ezie.
DH150-7 na otu tonnage excavator, arụmọrụ zuru oke nke akụrụngwa na-ekpuchi uru niile nke ngwaahịa ndị yiri ya, nke pere mpe, na-agbanwe agbanwe, arụmọrụ ya dabere na nkwado mbụ, iji mepụta uru dị elu maka ndị ahịa. DH150-7 dabara maka ịga ije n'okporo ụzọ dị warara ma nwee ọtụtụ ihe eji eme ihe na mpaghara nwere ala dị larịị na obere arụ ọrụ.
Onye na -egwuputa ihe n'etiti DH150-7
Nkọwapụta Onye isi nha
ibu ibu（n'arọ） 13920 ngụkọta ogologo (mm) 7702
ịwụ （m³） 0.27-0.76 mkpokọta obosara (mm) 2602
ogologo ọganihu (mm) 4602 ngụkọta ogologo (mm) 2982
ogologo ogologo (mm) 2900 Ogo ụlọ (mm) 2832
Ịrụ ọrụ Obosara elu (mm) 2492
ọsọ ọsọ（rpm） 11.9 Isi ruo anya (mm) 922
ọsọ ọsọ（Km/h） 3.3-4.9 Ogologo ogologo ogologo (mm) 3497
ịwụ igwu ike（KN） 77.3/81.4 obosara palte na -adị ogologo (mm) 602
mkpisi igwu osisi（ KN） 57.7/63 Ogologo obosara (mm) 2600
Injin Ogologo ụzọ ụgbọ okporo ígwè (mm) 2000
engine nlereanya ISUZU4jj1 Ogologo ala kacha nta (mm) 408
ike akara（Kw/rpm） 75/1900 Radius nke gyration (mm) 2202
usoro jụrụ oyi mmiri jụrụ oyi Ọrụ nso
Hydraulic usoro Oke diggign nso (mm) 8742
ụdị mgbapụta mgbapụta axialpis ton oke ala egwu ala (mm)
isi mgbapụta eruba（L/min） 2*116 oke igwu omimi (mm) 6132
njupụta nwuo isi（Mpa) 32.4/34.3 ogo kachasị egwu ala (mm) 8952
circuit hydraulic na -eje ije (Mpa) 34.4 ogologo ogologo crawler (mm) 6532
okirikiri hydraulic circuit (Mpa) 27.2 Oke igwu ala omimi obosara (mm) 4652
Injin DoosanDE08, Isuzu6BG1
Ike akara 110kw/1950rpm, 135kw/1950rpm
DH225-7 onye na-egwupụta ihe dị obere nwere arụmọrụ kwụsiri ike yana arụ ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin mbụ ahụ ka o wee nwee ike nweta nsị ikuku ụlọ. A kwadebere ya n'ụdị fan ọhụrụ na onye na -agbachi nkịtị. Ọ bụ injin gburugburu ebe obibi na -emezu ụkpụrụ mkpọtụ Europe. Mmepe nke nchekwa gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbanwe arụmọrụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ọrụ ahụ. Onye na-egwu ihe DH225-7 na-eji sistemụ hydraulic Korea kacha mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike kesaa mmanụ nha dịka ihe achọrọ si dị, ka ogwe aka, mkpanaka na bọket wee nwee ike rụọ ọrụ na -agbanwe, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Ghọta ihe ị chọrọ n'ezie.
Ezubere maka ngwa dị oke mkpa, DH225-7 na-abịa ọkọlọtọ nwere ngalaba ọrụ n'ihu n'ihu na nnukwu ịwụ 1.2m3 maka olulu kachasị. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ikike ịkwa iko dị elu, kamakwa arụmọrụ arụmọrụ, na -enyere ndị ahịa aka ịbawanye ego ha ga enweta. Ọ bụ ugbu a otu n'ime ụdị ahịa kacha ere n'ahịa. A na -ejikarị ụdị onye na -egwupụta ihe na -arụ ọrụ arụ ọrụ ala, dị ka igwu ala ntọala, ụzọ okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè.
Onye na -egwuputa ihe n'etiti DH225-7
Nkọwapụta Radius nke gyration (mm) 2750
ibu ibu（n'arọ） 21500 opekempe ala (mm) 480
ogologo ọganihu (mm) 5700 Ogologo ụgbọ okporo ígwè (mm) 2390
ịwụ（m³） 0.5-1.28/ obosara crawler (mm) 2990
ogologo ogologo (mm) 2900 obosara palte na -adị ogologo (mm) 600
Ịrụ ọrụ ogologo crawler (mm) 4440
mkpisi igwu osisi（ KN） 97 ogologo crawler (mm) 3645
ịwụ igwu ike（KN） 136.2 ahụ ruo ebe dị anya (mm) 1105
Ọsọ ije（Km/h） 3.1-4.5 Ogo ụlọ (mm) 3000
ọsọ ọsọ（rpm） 12.4 ngụkọta ogologo (mm) 3030
Injin mkpokọta obosara (mm) 2990
usoro jụrụ oyi mmiri jụrụ oyi ngụkọta ogologo (mm) 9510
ụdị moto 1 DoosanDE08 Ọrụ nso
ike akara（Kw/rpm） 110/1950 oke igwu ala omimi（2.5m）(mm) 6445
ụdị moto 2 Isuzu6B41 ịdị omimi nke ịdị obosara mgbidi obosara (mm) 6045
ike akara（Kw/rpm） 135/1950 ogo kachasị na -ebutu (mm) 6810
Sistemụ hydraulic ogo kachasị egwu ala (mm) 9660
Isi mgbapụta eruba（ L/min） 2*215 ebe kacha egwu ala (mm) 6630
Ụdị mgbapụta isi mgbapụta piston axial na -agbanwe agbanwe ogologo okpokoro ala (mm) 9735
Onye isi nha ogologo okpokoro ala (mm) 9910
Injin Doosan DE08, Isuzu6HK1
Ike akara Njikwa 147kw/1900rpm, Njikwa 190kw/1900rpm
DH300-7 onye na-egwupụta ihe nwere ọkara nwere arụmọrụ kwụsiri ike yana arụ ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin mbụ ahụ ka o wee nwee ike nweta nsị ikuku ụlọ. A kwadebere ya n'ụdị fan ọhụrụ na onye na -agbachi nkịtị. Ọ bụ injin gburugburu ebe obibi na -emezu ụkpụrụ mkpọtụ Europe. Mmepe nke nchekwa gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbanwe arụmọrụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ọrụ ahụ. DH300-7 excavator na-eji sistemụ hydraulic Korea kacha mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike kesaa mmanụ nha dịka ihe achọrọ si dị, ka ogwe aka, mkpanaka na bọket wee nwee ike rụọ ọrụ na -agbanwe, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Ghọta ihe ị chọrọ n'ezie.
DH300-7 bụ “kpakpando na-azọpụta mmanụ” na klaasị tọn iri atọ. Ike dịkwa ike, na ọrụ ogwugwu siri ike ma dị ike. Ọ bụ ugbu a otu n'ime ụdị ahịa kacha ere n'ahịa. A na -ejikarị ụdị igwe ihe a na -arụ ọrụ arụ ọrụ ala, dị ka igwu ala ntọala, ụzọ okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ oloko.
ibu ibu（n'arọ） 29600 ngụkọta ogologo (mm) 10620
ịwụ （m³） 0.63-1.75 mkpokọta obosara (mm) 3200
ogologo ọganihu (mm) 6245 ngụkọta ogologo (mm) 3365
ogologo ogologo (mm) 2500 Ogo ụlọ (mm) 3065
Ịrụ ọrụ elu obosara (mm) 2960
ọsọ ọsọ（rpm） 10.1 ahụ ruo ebe dị anya (mm) 1175
ọsọ ọsọ（Km/h） 3.0-5.0 ogologo ogologo crawler (mm) 4010
ịwụ igwu ike（KN） 188/199.9 Ogologo ogologo ogologo (mm) 4930
mkpisi igwu osisi（ KN） 155.8/164.6 obosara palte na -adị ogologo (mm) 600
Injin obosara crawler (mm) 3200
ụdị moto 1 DoosanDE08 Ogologo ụgbọ okporo ígwè (mm) 2600
ike akara（Kw/rpm） 147/1900 opekempe ala (mm) 500
ụdị moto 2 Isuzu6HK1 Radius nke gyration (mm) 3200
ike akara（Kw/rpm） 190/1900 Ọrụ nso
usoro jụrụ oyi mmiri cooli ogologo okirikiri diggigng (mm) 10155
Sistemụ hydraulic ogologo okirikiri diggigng (mm) 9950
ụdị mgbapụta agbanwe axi pistin mgbapụta oke igwu omimi (mm) 6275
isi mgbapụta eruba（L/min） 2*246 ogo kachasị egwu ala (mm) 9985
isi jubigakwara ókè pressu 27.9/34.3 ogo kachasị na -ebutu (mm) 6960
circuit hydraulic na -eje ije (Mp 32.5 ịdị omimi nke ịdị obosara mgbidi obosara (mm) 5370
okirikiri hydraulic circuit (Mpa) 27.9 oke igwu ala omimi（2.5m）(mm) 6505
mgbapụta mgbapụta pilot（L/min） 28.5
Injin Doosan DE12, Isuzu6HK1
Ike akara 202kw/1800rpm, 212kw/1800rpm Njikwa
DS380-7L nnukwu onye na-egwu ihe nwere arụmọrụ kwụsiri ike yana ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin mbụ iji zute ụkpụrụ nsị ikuku ụlọ. A kwadebere ya n'ụdị fan ọhụrụ na onye na -agbachi nkịtị. Ọ bụ injin gburugburu ebe obibi na -emezu ụkpụrụ mkpọtụ Europe. Mmepe nke nchekwa gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbanwe arụmọrụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ọrụ ahụ. Onye na-egwu ihe DS380-7L na-eji sistemụ hydraulic Korea kacha mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike kesaa mmanụ nha dịka ihe achọrọ si dị, ka ogwe aka, mkpanaka na bọket wee nwee ike rụọ ọrụ na -agbanwe, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Ghọta ihe ị chọrọ n'ezie.
Ezubere maka ogbunigwe ndị China na nnukwu ndị ahịa ụwa, DS380-7L bụ maka nnukwu ibu, obosara buru ibu na ntọala kwụsiri ike. Ịwụ bụ nnukwu na arụmọrụ ọrụ dị elu, nke na -ebelata oriri mmanụ ma na -abawanye uru maka ndị ahịa.
Nnukwu onye na -egwupụta ihe DH380-7
Nkọwapụta okirikiri hydraulic circuit (Mpa) 29.5
ibu ibu（n'arọ） 38102 Onye isi nha
ịwụ （m³） 1.70-1.91 ngụkọta ogologo (mm) 11382
ogologo ọganihu (mm) 6502 mkpokọta obosara (mm) 3352
ogologo ogologo (mm) 2902 ngụkọta ogologo (mm) 3722
Ịrụ ọrụ Ogo ụlọ (mm) 3202
ọsọ ọsọ（rpm） 8.4 Isi ruo anya (mm) 1252
ọsọ ọsọ（Km/h） 2.8-5.0 Ogologo ogologo ogologo (mm) 4977
ịwụ igwu ike（KN） 254.8 obosara palte na -adị ogologo (mm) 600
mkpisi igwu osisi（ KN） 202 ogologo ogologo crawler (mm) 4052
Injin Ogologo ụzọ ụgbọ okporo ígwè (mm) 2752
ụdị moto 1 DoosanDE12 Ogologo ala kacha nta (mm) 547
ike akara（Kw/rpm） 202/1800 Radius nke gyration (mm) 3532
ụdị moto 2 Isuzu6HK1 Ọrụ nso
Ike akara（Kw/rpm） 212/1800 ogologo diggigng kacha (mm) 10847
usoro jụrụ oyi mmiri jụrụ oyi ogologo diggigng kacha (mm) 10637
Sistemụ hydraulic oke igwu omimi (mm) 7137
ụdị mgbapụta agbanwe agbanwe ogo kachasị egwu ala (mm) 10102
isi mgbapụta eruba（L/min） 2*284 ogo kachasị na -ebutu (mm) 7182
circuit hydraulic na -eje ije (Mpa) 34.4 ịdị omimi nke ịdị obosara mgbidi obosara (mm) 3812
Injin Doosan DE12, Isuzu6UZ1
Ike akara Njikwa 238kw/1800rpm, 257kw/1800rpm
DH500-7 nnukwu onye na-egwupụta ihe nwere arụmọrụ kwụsiri ike na arụ ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin mbụ iji zute ụkpụrụ nsị ikuku ụlọ. A kwadebere ya n'ụdị fan ọhụrụ na onye na -agbachi nkịtị. Ọ bụ injin gburugburu ebe obibi na -emezu ụkpụrụ mkpọtụ Europe. Mmepe nke nchekwa gburugburu ebe obibi obodo.
Mgbanwe arụmọrụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ọrụ ahụ. Onye na-egwu ihe DH500-7 na-eji sistemụ hydraulic Korea kacha mma. Dika ihe ndị ọrụ chọrọ si dị, onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike kesaa mmanụ nha, ka ogwe aka, draya na bọket nwee ike rụọ ọrụ nke ọma, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma. Ghọta ihe ị chọrọ n'ezie.
DH500-7 bụ akara aka maka ọrụ nsị na China. Ọ bụ nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya maka ogbunigwe siri ike n'okpuru ọnọdụ siri ike, ntụkwasị obi dị elu na ịdịte aka, na arụmọrụ mmanụ ọkụ bụ isi asọmpi. Ọdịdị mara mma nke ikuku na-enyere aka na mgbazinye nke obere ikuku anwụrụ ọkụ na igwe na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-ekwe nkwa akụ na ụba mmanụ ọkụ mgbe ị na-ahụ arụmọrụ nke akụrụngwa.
Nnukwu onye na -egwupụta ihe DH500-7
Nkọwapụta circuit hydraulic na -eje ije (Mpa) 32.5
ibu ibu（n'arọ） 50800 okirikiri hydraulic circuit (Mpa) 29.6
ịwụ （m³） 2.17 Onye isi nha
ogologo ọganihu (mm) 7100 ngụkọta ogologo (mm) 12132
ogologo ogologo (mm) 3350 mkpokọta obosara (mm) 3342
Ịrụ ọrụ ngụkọta ogologo (mm) 3700
ọsọ ọsọ（rpm） 8.9 Ogo ụlọ (mm) 3350
ọsọ ọsọ（Km/h） 3.0-5.6 ahụ ruo ebe dị anya (mm) 1458
ịwụ igwu ike（KN） 286.2/303.8 ogologo crawler (mm) 5460
mkpisi igwu osisi（ KN） 212.7/225.4 obosara palte na -adị ogologo (mm) 600
Injin obosara crawler (mm) 3350
ụdị moto 1 DoosanDE12 opekempe ala (mm) 772
ike akara（Kw/rpm） 238/1800 Radius nke gyration (mm) 3750
ụdị moto 2 Isuzu6UZ1 Ọrụ nso
ike akara（Kw/rpm） 257/1800 ogologo diggigng kacha (mm) 12110
usoro jụrụ oyi mmiri jụrụ oyi ogologo diggigng kacha (mm) 11865
Hydraulic sysetem oke igwu omimi (mm) 7800
ụdị mgbapụta mgbapụta piston axial na -agbanwe agbanwe ogo kachasị egwu ala (mm) 11050
isi mgbapụta eruba（L/min） 2*355 ogo kachasị na -ebutu (mm) 7900
isi jubigakwara ókè pressu 32.3/34.3 ịdị omimi nke ịdị obosara mgbidi obosara (mm) 4400
Nke gara aga: Mpi obere tipper gwongworo 6tons
Osote: QINGLING ISUZU-Mini Dumper-QL3040ZA5FAJ
Onye na -egwu ihe na -eburu wiil